Macluumaad cusub oo ku saabsan tilmaamaha safarka ee Wasaaradda Arimaha Dibadda ee ku saabsan COVID-19 - Mino Danmark
08/07/2020 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus /
Waxa furan in loo safri karo dalal badan oo EU/Schengen iyo UK kamid ah, halkaasoo Machadka Dowladda ee Serum ku qiyaaseen in cudurka faafintiisu hooseeyo, deenishkuna ay soo geli karaan wadanka iyagoon xayiraad lagu soo xadirin. Wadamada ku jira EU/Schengen iyo UK, oo Machadka Dowladdu u aqoonsadey inay yihiin ‘dalalka karantiil’ sababtuna ay tahay caabuqa faafidiisa iyo isbadalkooda, kuwaas oo calaamad oranji ah la saarey, taas oo ah tallooyinka Wasaaradda Arimaha Dibadda (tallado waa ha safrin safar aan loo baahneyn). Tilmaanta safarka ayaa sidoo kale calaamad oranji lagu muujiyey oo ah waddamada EU/Schengen iyo UK oo xayiraad weyn galiyeen dadka deenishka ah ee u safrayan.
Ka akhriso macluumaadka ku saabsan tilmaamaha safarka ee Wasaaradda Arimaha Dibada ee wadamada EU iyo Schengen, halkan. Læs mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for EU- og Schengenlande her.
Intaa waxaa sii dheer, Wasaaradda Arimaha Dibadda waxay furtay safaro lagu tagi karo dhowr dalal oo ka baxsan EU / Schengen iyo UK, halkaasoo EU ay qiimeysay in horumarka caabuqa wadamadaas uu ka hooseeyo ama la mid yahay EU. Halkan, sidoo kale, shuruudo dheeraad ah ayaa laga yaabaa in dalku uu san lahayn xayiraad soo gelitaan wadanka ah ama shuruudaha karantiil ee loogu talagalay dadka safarka ah ee deenishka ah iyo in xaaladda guud ee amniga waddanka la aqbali karo.
Ka akhri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tilmaamaha safarka ee Wasaaradda Arimaha Dibadda ee wadamada ka baxsan EU iyo Schengen, halkan. Læs mere om Udenrigsministeriets rejsevejledninger for lande uden for EU og Schengen her.
Wadamada uu tilmaamaha safarku yahay huruud, Wasaaradda Arimaha Dibadda waxay kugu dhiirigelineysaa inaad taxaddar dheeraad ah muujiso, lasocoto tilmaamaha safarka ee dalka oo aad raacdo talooyinka Wasaaradda Arimaha Dibada ee gaarka u ah waqtiga COVID-19 Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad kala soo dajisato app-ka ”Rejseklar” oo aad isku qorto liiska dheenishka (Danskerlisten). Ka dib waxaad heli doontaa macluumaad haddii ay jiraan isbed dhinaca tilmaamaha safarka ee wadanka aad u safraysid.
Waxaad ka heli kartaa macluumaad la cusboonaysiiyey oo ku saabsan dal kaste oo ku sugan boggaga safaaradaha deenishka. Waxay noqon kartaa macluumaad ku saabsan xannibaada safarka iyo tallaabooyin kale oo ay qaadaan maamulka deegaanka si looga hortago faafitaanka cudurka.
Denmark kuma lahan safaarado dalalkoo dhan. Safaaradaha qaarkood ayaa sidaas daradeed ka masuul ah dhowr wadan. Waxaad ka heli kartaa safaaradda adiga ku quseysa, adiga magaca dalka ku qoraya halkan he
Du er her: Mino Danmark / Macluumaad cusub oo ku saabsan tilmaamaha safarka ee Wasaaradda Arimaha Dibadda ee ku saabsan COVID-19